Xiriirka macaamiisha: oo ay ka heshay sanduuqa Belgian, Webhelp wuxuu hada bartilmaameedsanayaa macaamiisha pan-Afrika - JeuneAfrique.com - SAAXIIBADA DALKA
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Xiriirka macaamiisha: oo ay ka heshay sanduuq Belgian, Webhelp wuxuu hada bartilmaameedsanayaa macaamiisha pan-Afrika - JeuneAfrique.com
Horraantii bishii Agoosto, Kooxda Brussels Lambert waxay la wareegeen Webhelp, oo ah khabiir Faransiis ah oo ku kala sugan shan waddan oo qaaradda ah, oo loogu talagalay 800 milyan euro. Ujeedada sanduuqa maalgashiga ee GBL ayaa ah in laga dhigo ciyaartooygii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee ka tirsan xiriirka macaamiisha 2025.
Wax ka yar hal bil ka dib markii ay wadahadalo gaar ah la galeen sanduuqa maalgashiga ee Mareykanka KKR, maalgashadaha reer Belgium Groupe Bruxelles Lambert (GBL) ayaa la saxiixday heshiis si uu ula wareego aqlabiyad Faransiis Webhelp, oo ah cayaaryahan caalami ah xiriirka. macaamiisha. Qiimaha howlgalka: 800 milyan euro. Aasaasayaasha Frédéric Jousset iyo Olivier Duha ayaa weli ah saamilaysayaal laga tiro badan yahay.
Waqtiga iyo caasimada
Ka dib markii ay soo martay horumar dhan-wareeg ah (+ 240% isbeddel ah inta u dhaxaysa 2015 iyo 2019) oo ay labanlaabantay cabbirkeedii afar sano gudahood iyada oo ay ugu wacan tahay imaatinka caasimadda maalgelinta maalgashiga Mareykanka ee KKR ee 2015 - oo siddeeda u dhigaysa Ganacsiga 2018 illaa 1,3 bilyan euro -,, Webhelp wuxuu hadda doonayaa inuu ka faa'iideysto ballanqaad muddada dheer ah (inta u dhaxaysa toddobo iyo toban sano) qoys haysta shirkad gacanta ku haysa si aan toos ahayn iyo si siman oo ay iska dhaxlaan milkiilaha Bilyaneer Biljamka Albert Frère iyo Canadian Paul Desmarais.
Afrika wey koraysa
Vincent Bernard, madaxweynaha Webhelp ee aagga ku hadla Faransiiska ayaa yidhi: "Waxaan u baahnayn waqti iyo maal gelin si aanu u furno wadamo cusub oo aan wax uga iibsano." Isaga oo "fursad" ku jira ereyadiisa, istiraatiijiyadda kooxeed ee Afrika ayaa hadda si aad ah ugu lug leh: "Afrika way sii kordhaysaa waxaanan doonaynaa in aan noqonno kuwa firfircoon anagoo ah ka ciyaar ka ciyaaraya horumarka ganacsiga".
Maalgeli dalal cusub
Si kale haddii loo dhigo, kooxda 55 000 shaqaalaha ee dalalka 35 oo ay ku jiraan qiyaastii 18 000 qaaradda, waxay ku talajirtaa inay sii waddo saameynta ay ku leedahay waddamadii ay horay u dhisneyd. Xarun cusub ayaa ka furi doonta dalka Marooko magaalada Marrakech bisha Oktoobar. Algeria, Madagascar, Ivory Coast iyo Koonfur Afrika sidoo kale waxay yeelan doonaan hal xarun kale dhamaadka dhamaadka 2019.
Wuxuu kaloo doonayaa inuu maal galiyo dhul cusub. Wadamada suurto galka ah: Benin, Senegal, Cameroon ama Togo halkee Majorel ayaa dhawaan garaacay adoo garaacaya macaamiisha Amazon. Bariga Afrika sidoo kale waa mid ka mid ah gobollada sahaminta loogu talagalay macaamiisheeda ku hadla Ingiriisiga.
Ka sakow koritaanka gudaha, kooxda lagu aasaasay 2000 by Olivier Duha iyo Frédéric Jousset sidoo kale waxay baarayaan qaaradda raadinta soo iibsashada. Hadafka ugu dambeeya ayaa ah in la isu taago sidii ciyaartoy Afrikaan u noqda Afrika iyadoo soo jiidanaysa shirkadaha maxalliga ah iyo macaamiisha caalamiga ah ee ku yaal qaaradda. Vincent Bernard wuxuu yidhi: "Maraykanka iyo Latin America, Afrika waa mid ka mid ah sedexda tiir ee horumarka," ayuu xaqiijiyay Vincent Bernard. 2025, Webhelp waxay ku talajirtaa inay labanlaabto dakhligooda 2019, oo lagu qiyaaso in kabadan 1,5 bilyan euro.